Ihe kacha mma mma na akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo | Gam akporosis
Like na-amasị gị yi na akwụkwọ ahụ aja? N'okpuru ị ga-ahụ a dum nhọrọ nke na akwụkwọ ahụ aja na pụtara ìhè-aj u nke mere na i nwere ike n'ụzọ zuru ezu hazie gị gam akporo ngwaọrụ na tinye a aka nke agba n'ụlọ gị ma ọ bụ mkpọchi ihuenyo.
Hazie ekwentị gam akporo gị na njiri mara mma na nke mbụ ga - eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Họrọ ebe kachasị amasị gị n’etiti agba niile na gallery.
N'okpuru ị nwere gallery jupụtara na ya mobile ndabere ma ọ bụ mbadamba jupụtara na agba
Papers nwere mmasị na akwụkwọ ahụ aja? Mgbe ahụ e mepụtara ngalaba a maka gị. A nnukwu nhọrọ nke kacha yi akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba na ahịa. Ọ bụghị naanị na agba nwere ọrụ pụrụ iche na ha, anyị na-ahụkwa ụdị na usoro kachasị dị na mbụ. Ha niile nwere ụdị kacha mma.